Bank of China inozivisa ese crypto madhiri asiri pamutemo, Bitcoin tsaona
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » China Kuputsa Nhau » Bank of China inozivisa ese crypto madhiri asiri pamutemo, Bitcoin tsaona
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • China Kuputsa Nhau • mhosva • Hurumende Nhau • Investments • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Kumhiri kwemakungwa mari inoshandura iyo inoshandisa internet kupa masevhisi kuvagari vekumba inoonekwawo zvisiri pamutemo zviitiko zvemari.
Masangano emari uye asiri emabhangi ekubhadhara masangano haakwanise kupa masevhisi kune zviitwa uye mashandiro ane chekuita nemari chaiyo.
Nhamba yepasi rose yedhijitari nemari yemusika yakadonhedza pamusoro pe5% kusvika pazasi pe $ 42,000.
Dzimwe cryptocurrencies dzakatevera kuderera kwemaitiro neether ichidonhedza 10% kusvika pazasi pe $ 2,800 8, nepo dogecoin yakarova pamusoro pe0.20% kusvika pazasi pe $ XNUMX.
People's Bank yeChina yakazivisa hurongwa hwekurambidza masangano emari, makambani emari uye mabhizinesi einternet kubva mukufambisa kutengeserana kwe cryptocurrency, pamwe nekusimbisa kuongororwa kwe njodzi kubva kumabhizimusi e cryptocurrency zviitiko.
FILE FOTO: Chidhori chidiki chidhizaini chinoonekwa pane zvinomiririrwa neBitcoin chaiyo mari inoratidzwa pamberi pemufananidzo wemureza weChina mumufananidzo uyu, Kubvumbi 9, 2019. REUTERS / Dado Ruvic / Mufananidzo
Chinese regulator yakadzokorora chimiro chayo chakaomarara pamari yedhijitari nhasi, ichizivisa zviitiko zvese zvekutengeserana zvekambani nemutemo zvisiri pamutemo uye zvinorambidza mhiri kwemakungwa kuchinjaniswa kubva mukupa masevhisi kune maChinese investa.
"Mari dzekumhiri kwemhiri kwemakungwa dzinoshandisa iyo internet kupa rubatsiro kune vanogara mudzimba dzinoonekwawo sechiitwa zvisiri pamutemo zvemari," iyo People's Bank of China yakatumirwa kune yayo webhusaiti.
"Masangano emari uye asiri emabhangi ekubhadharisa masangano haakwanise kupa mabasa kune zviitwa uye mashandiro ane chekuita nemari chaiyo," rakadaro bhanga guru.
Kufambisa kwacho kwakatumira bitcoin uye imwe mari chaiyo iri kudonha. Iyo yepasi rose imwe yedhijitari aseti nemusika capitalization, Bitcoin, yakadonhedza pamusoro pe5% kusvika pazasi pe $ 42,000. Mamwe ma cryptocurrencies akatevera kuderera kwemaitiro neether ichidonhedza 10% kusvika pazasi pe $ 2,800 8, nepo dogecoin yakarova pamusoro pe0.20% kusvika pazasi pe $ XNUMX, sekureva kwewebsite yeCoinmarketcap.
Mutongo uchangoburwa unouya sechikamu chakakura chehurumende-inomhanyisa mushandirapamwe nemaChinese macomputer ekurwisa cryptocurrencies. Pakutanga gore rino, Beijing yakarambidza kuchera munzvimbo dzakakura dze bitcoin, dzakadai seSichuan, Xinjiang uye Inner Mongolia, izvo zvakakonzera kudonha kwakasimba kwesimba rekugadzirisa bitcoin, sezvo vazhinji vemigodhi vakatora michina yavo isingaenderane.